လာမည့် ပညာသင်နှစ် အတွက် ပညာရေးကောလိပ် သင်တန်းဆင်း တစ်သောင်းကျော် ခန့်ထားပြီးမှသာ နေ့စားလေ?? - Yangon Media Group
လာမည့်ပညာ သင်နှစ်အတွက် ပညာရေးကောလိပ် များမှ သင်တန်းဆင်းထားသောသူ တစ်သောင်းကျော်ကို ခန့်ထားပြီးမှ သာ နေ့စားလပေးမူလတန်းပြများ ကိုခေါ်ယူခြင်းကို စဉ်းစားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရ သည်။ လာမည့်ပညာသင်နှစ်ဖြစ် သော ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုနှစ်ပညာ သင်နှစ်အတွက် ပညာရေးကောလိပ် များမှ လုပ်ငန်းခွင်အကြို မူလတန်း ဆရာအတတ်ပညာသင်တန်းနှင့် ဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာသင် တန်းများမှဆင်းသူ တစ်သောင်း ကျော်ရှိပြီး ¤င်းတို့ကိုခန့်ထားရေး များဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ နေ့စားလ ပေးများခေါ်ယူရေးများကိုစဉ်းစား ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက် ရှိတွင်နေ့စားလပေး မူလတန်းပြများ ကိုခေါ်ယူနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိကို တိုင်း ဒေသကြီးပြည်နယ်များ၏လိုအပ် ချက်စာရင်းများကိုလည်း တွက်ချက် လျက်ရှိကြောင်း အခြေခံပညာဦးစီး ဌာနမှသိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသ ကြီးပြည်နယ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက် စာရင်းတွေကိုတွက်နေတယ်။ ဘယ် လောက်လိုဦးမလဲဆိုတာတော့ မသိ ရသေးဘူး။ လိုအပ်ချက်စာရင်းတွေ ကိုဝန်ကြီးရုံးတင်ပြီးမှ ဘယ်လောက် လိုတယ်။ ဘယ်လိုဖြည့်ရမယ်ဆို တာညွှန်ကြားချက်စောင့်ရမှာ။ PPTT,D.TEd ဆင်းတွေကိုခန့်ပြီး တော့မှ လိုအပ်တဲ့စာရင်းအပေါ် မူတည်ပြီး ခေါ်သင့်တယ်ဆိုရင် ခေါ်ရမှာ”ဟု အခြေခံပညာဦးစီး ဌာနမှအရာရှိတစ်ဦးက မတ် ၂၆ ရက် တွင်ပြောကြားသည်။ ပညာရေးကောလိပ် ၂၅ ခုမှ လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာ အတတ်ပညာသင်တန်း(၄/၂ဝ၁၇) ဆင်းသူခြောက်ထောင်ခန့်နှင့်ဆရာ အတတ်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း ဆင်းငါးထောင်ကျော်ကို အခြေခံ ပညာဦးစီးဌာနသို့ ယခင်နှစ်ကုန် ပိုင်းခန့်ကတည်းက လွှဲပြောင်းပေး ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာနမှသိရသည်။
” PPTT ရော D.TEd ရော ကျွန်တော်တို့အကုန်လွှဲပေးပြီးသွား ပါပြီ။ သူတို့ဘက်ကခန့်ထားဖို့နီး နေပြီလို့တော့ထင်တယ်။ PPTT ကခြောက်ထောင်လောက် D.TEd လည်းခြောက်ထောင်နီးပါးလောက် ရှိပါတယ်”ဟု အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီး ဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာအောင်အောင်မင်းက ပြောကြားသည်။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ပညာသင်နှစ် အတွက် ဘွဲ့ရနေ့စားလပေးမူလတန်း ပြများကိုခန့်ထားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ လက် ရှိတွင် မူလတန်းပြအရေအတွက် မှာ ငါးသောင်းခန့်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ မိုဂါဒစ်ရှူးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ၊ ငါးဦးသေဆုံး
တရုတ်နိုင်ငံ ရေတပ် နှစ်ပတ်လည်အတွက် နိုင်ငံစုံပါဝင်သော ရေတပ်ပြပွဲတွင် ပါဝင်ရန် ပထမဆုံး ပြည??